Pet Vagadziri - China PET Fekitori & Vatengesi
• Isu tinopa presales sevhisi mumhando dzakasiyana, semuenzaniso, dhizaini yekuratidzira uye yakavhurika furu yezvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, ipa iyo Kudhinda Kwekupenda sezvinhu zvinodiwa nevatengi, nezvimwe.
• Tumira masampuli kune vatengi sereferenzi
Mari yekudyara: Isu tinopa masevhisi ekuongorora purofiti yechigadzirwa, kurudziro yechigadzirwa uye bhajeti inoenderana.
Hunhu hwemhando yepurasitiki bhodhoro. Kuitisa chigadzirwa chemhando yepamusoro kubva kumugadziri wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuona kana zvichidikanwa. Pharmaceutical epurasitiki mabhodhoro emakambani anofanirwa kuumba zvebhizinesi zviyero zvakakwirira kupfuura zvepasirese zviyero, uye indasitiri zviyero zvinofanirwa kuve zvakaomarara;
PET mabhodhoro epurasitiki anotora yakakosha nzvimbo yemusika mune angangoita ese maratidziro emakesi emidziyo. Izvi zvakasununguka hazvipatsanurike kubva kune zvakanakira PET mabhodhoro epurasitiki. Chekutanga pane, pet peturu bhodhoro zvinhu kugadzikana zvakanaka, tembiricha kuramba, mune imwe tembiricha kuchengetedza zvinhu kugadzikana, kunyanya yakakodzera chikafu kurongedza. Kechipiri, mabhodhoro epurasitiki epurasitiki ari pachena uye ane akafanana neakafanana nemabhodhoro egirazi, asi iwo akareruka uye anotetepa.
Muchokwadi, kuchengetedzwa kwemabhodhoro ePET hakupatsanurike kubva kune zvakanakira PET mabhodhoro epurasitiki. Chekutanga ndechekuti PET mabhodhoro epurasitiki ane huremu huremu uye anogara mune zvinhu. Yechipiri ndeyekuti PET mabhodhoro epurasitiki akadhura mumutengo. Inofananidzwa negirazi uye ceramic kurongedza, mutengo wePET mabhodhoro epurasitiki wakaderera zvakanyanya. Chechitatu, mabhodhoro ePET ane mwero wepamusoro wekushandisa zvakare, uyo wakakwirira zvakanyanya kupfuura mamwe mabhodhoro epurasitiki, ayo anobatsira kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Unyoro hwemukati hwezvinhu hunofanirwa kunge hwakaomeswa zvizere isati yagadzirwa. Kazhinji, iyo yekuomesa tembiricha iri 160 ℃ yezvinhu zvakaomeswa zvinhu. Kana ikachengetwa mumhepo kwenguva yakareba, haizotora mwando. Naizvozvo, kana izvo zvigadzirwa zvikaomeswa, zvinofanirwa kushandiswa nekukasira kana akananga nekuomesa kunoenderera, zvikasadaro zvinofanirwa kuchengetwa muiyo incubator pa90 ~ 100 ℃ yekumira, kuitira kudzivirira kunyorova zvakare mushure mekuoma.